Waa Maxay Ujeedadiisu? - Jamaahiirta Arsenal Oo Layaab Ay Ku Noqotay Go'aamadii Tababare Emery Ee Kulankii Man City - Latest football news
Waa Maxay Ujeedadiisu? – Jamaahiirta Arsenal Oo Layaab Ay Ku Noqotay Go’aamadii Tababare Emery Ee Kulankii Man City
February 4, 2019 Cabdiwahab Axmed
Arsenal ayaa qadhaadh loogu xambaariyey garoonka Etihad oo ay ku booqatay Manchester City, waxaanay u dagtay kaalinta lixaad ee horyaalka Premier League, taas oo ka dhigan inay u baahan tahay mucjsio si ay uga mid noqoto afarta ugu sarraysa.
Manchester City oo ka cadhaysan guul-darradii ay usbuucii hore kala kulantay Newcastle United ayaa 4-1 ku xasuuqday Arsenal, waxaana saddex ka mid ah goolasha shabaqa taabsiiyey Sergio Aguero.
Arsenal ayaa waxay hadda leedahay 47 dhibcood, waxaanay ku jirtaa kaalinta lixaad iyadoo Manchester United ay ka riixatay booskii shanaad oo ay yeelatay 48 dhibcood, halka Chelsea oo afraad ku jirtaana ay 50 dhibcood haysato.
Saddexda kaalmood ee sare ayaa waxa isku eryanaya Liverpool oo hoggaanka ku haysa 61 dhibcood laakiin kulankeeda ciyaaraysa Isniinta, halka Manchester City oo labaad fadhidaa ay leedahay 59 iyo Tottenham oo 57 dhibcood haysata.
Guul-darradan ugu dambaysay ee niyad-jabka ah, waxa Arsenal u wehelinayey shax aad u liidatay oo uu tababare Unai Emery garoonka kusoo galay, taas oo ka koobnayd shan difaac ah, laba dhex kubbad-dileyaal ah iyo saddex weerar ah, taas oo ka dhigan in qaab difaacis kaliya ay kusoo talo-gashay, isla markaana aanay hal-abuurkii khadka dhexe garoonkaba soo gelin.
Shaxda Emery ayaa ahayd 3-4-3 oo ka kooban saddex difaac ah, afar dhexe iyo saddex weerar, laakiin xaqiiqada dhabta ah sidaas may ahayn. Afarta khadka dhexe ayaa waxa ku jira laba difaac oo kala ahaa Saed Kolasinac iyo Stephan Lichtsteiner, kuwaas oo iyagoo dhexda jooga u ciyaarayay sida difaaca. Waxa iyaga ka dambeeyey Laurent Koscielny, Shkodran Mustafi iyo Nacho Monreal, halka ciyaaryahannada khadka dhexena ay kusoo urureen Matteo Guendouzi iyo Lucas Torreira. Weerarka ayaa waxa uu kusoo wada-bilaabay Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette iyo Alex Iwobi.
Tababare Unai Emery ayaa shaxdan kusoo galay iyadoo uu haysto Ramsey, Ozil iyo Denis Suarez, waxaana arrintan dhibsaday taageereyaasha naadiga oo iyadoon ciyaartuba dhamaanin cadho kula dul-dhacay macallinka kooxdooda, kaas oo ay sheegeen in aanay xattaa garanaynin ujeeddada uu leeyahay ee uu sidan ugu ciyaaray.
“Halkay tageen kubbad-abuureyaashii safka koowaad ee Ozil, Suarez iyo Ramsey, waxay fadhiyaan kaydka” Sidaas waxa soo qoray taageere cadhaysnaa.
“Ramsey, Ozil iyo Sarez dhamaantood way fadhiyaan, miyaanay ahayn in lagu bilaabo!!” Sidaana waxa soo qoray taageere kale.
Halkan ka akhriso qaar ka mid ah falcelintii taageereyaasha Arsenal
Ciyarta waxay ku dhamatay 3-1 ma ahan 4-1